Idokhumentari ethi The Line iphoxa okokuqala ngqa ngokungathathi ubungozi | Ngivela ku-mac
Ngenkathi Navy SEAL Eddie Gallagher emukelwa ekhaya sengathi uyisigebengu esikhundleni salokho abekulindele, kwaqala umkhankaso womphakathi lapho ngaphandle kokungenelela kwakhe nethimba lakhe, ukungenelela kwe-United States kwahlulelwa. Kule dokhumenti ekhishwe ngabakwa-Apple, imayelana nokubuyekeza izehlakalo zalabo bantu abahlelelwe indawo yezingxabano futhi basitshele uhlobo lwabo lwezehlakalo. Kodwa The Line uphoxekile ngoba usale phezulu nje, ngaphandle kokukwazi ukuthola umnyombo wendaba.
Abaqondisi uJeff Zimbalist noDoug Shultz benze umsebenzi omuhle kakhulu ukulungisa i-podcast yegama elifanayo kudokhumentari enezingxenye ezine. Ikhishwe muva nje ku-Apple TV +, abasebenzisi benkundla yokukhokha, ikakhulukazi abantu baseMelika, balindele ukuthi ama-protagonist akhulume mathupha. okwenzeka ekuthunyelweni e-Iraq.
Ngemuva kokuthi iMosul ibe isizinda sabashisekeli benkolo bethuka futhi bebulala ama-Iraqi akanye nawo, kwase kuyisikhathi sokuthi amasosha aseMelika anikele ngakho konke. Nokho lokho kwaphenduka igazi futhi amasosha engasenangqondo ezenza abacuphi bangempela. Imisho efana nokubiza amalungu e-ISIS ngokuthi "amaNazi anamuhla" kanye neMosul "ukubonisa okungcono kakhulu kwezimpilo zethu" noma lapho omunye wabo eqhathanisa ukuthunyelwa "nokuya e-Super Bowl", Bake babuza u-Eddie Gallagher. INaval Criminal Investigation Service ithwese uGallagher amacala okubulala, ngemuva kokulalela ubufakazi bozakwabo.
Bekunemibuzo eminingi ebekumele iphendulwe kanti ne-documentary ibibukeka izoyiphendula. Nokho, akubanga njalo. Abaqondisi, abazange bayifake ingcindezi futhi baye basilela kakhulu ekufuneni ukuthola iqiniso.
Manje isikhathi esishaqisayo yilapho uGallagher egcina evuma ukuthi wabulala isithunjwa sase-Iraqi (empeleni, wamhlukumeza imizuzu embalwa, ukuze abonise amasu okwelapha kwamanye ama-SEALs), ebuka ikhamera futhi ethi: "Ngilala kahle ebusuku."
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » Apple TV » Idokhumentari ethi The Line iphoxa okokuqala ngqa ngokungathathi ubungozi
I-iFixit inesibindi sokuqaqa futhi iqhathanise ama-AirPods namabhithi e-Fit Pro